Umhlaza kunye ne-Aquarius - Ukuhambelana kwiSini, Uthando kunye noBomi - Umhlaza
Umhlaza kunye ne-Aquarius
Ukuhambelana kweCancer kunye ne-Aquarius kuThando, uBomi, isondo, unxibelelwano, ubuhlobo kunye nokuthembela. x
Umhlaza kunye ne-AquariusUkuhambelana ngokwesondo kunye nobudlelwane obusondeleyo
Ubudlelwane bezesondo phakathi koMhlaza kunye ne-Aquarius bunokuba luxinzelelo kumaqabane omabini. Nangona Umhlaza Ithathwa njengolona phawu lunovakalelo lwezodiac, olulawulwa yiNyanga, lunokuba rhabaxa kwaye lubekude xa luziva lufuna ukumisela imida eyomeleleyo. U-Aquarius, ngakolunye uhlangothi, uyaziwa ngokuba ngumqambi, umntu oza kwenza utshintsho, kodwa ngokwenene, bangumqondiso osisigxina, uhle kakhulu kwiindlela zabo kwaye njenge-paradox - engatshintshiyo.
Xa besenza umsebenzi wesondo, uMhlaza unokugxininiswa kangangokuba baya kufuneka babeke loo mida kwaye u-Aquarius akayi kukwazi ukwenza utshintsho olufunekayo ukuze abe mnene kwiqabane labo loMhlaza. Kukho amandla amaninzi kwi-Aquarius ekufuneka isekelwe ngomsebenzi wabo womzimba kwaye oku kubandakanya isondo. Umhlaza awukuqondi ngokwenene oku kwaye uqinisekile ukuba kwiintlobano zesini nomntu omthandayo kuphela iimvakalelo ezifanele kwabelwane ngazo.
Ukuba u-Aquarius ufumana indlela yokunciphisa kwaye anganyanzeli nantoni na kwiqabane lakhe, kwaye ukuba iCancer ivumela ingqondo yabo enengqondo ukuba ithathe ixesha elithile abalichitha kunye, banokubelana ngamava esondo anomdla. Umhlaza uya kuzisa iimvakalelo kunye nokuthantamisa kubomi babo bokwabelana ngesondo kwaye u-Aquarius akasayi kuze avumele inkqubo ekruqulayo ithathe indawo. Ukuba bayalalanisa ekulingeni nasekutshintshisaneni ngokweemvakalelo, banokude baqalise ukonwaba.
Umhlaza kunye ne-AquariusThembela
Umhlaza usoloko unyanisekile kwaye unyanisekile, ngaphandle kweemeko xa besoyika ukusabela rhabaxa kwalowo bamthandayo, okanye ukubalimaza kakubi. Ngo-Aquarius, banokuziva benoxinzelelo lokwabelana ngezinto kwaye oku kungabonisa umba ongendlela zombini xa kuziwa ekuthembekeni. Ubume benkululeko be-Aquarius bunokubonakala buphambene kwiCancer, kwaye ukunyaniseka kweqabane labo malunga nokuphambana kwabo akuyi kunceda imvakalelo yangaphakathi yokungathembani ngezenzo zabo ezinokwenzeka. Yinto entsokothileyo kubo, kuba akukho namnye kubo ofuna ukuxoka, kodwa okwangoku ababonakali belithembile ikamva abanokwabelana ngalo.
Umhlaza kunye ne-AquariusUnxibelelwano kunye nengqondo
Umhlaza kunye no-Aquarius bayakwazi ukudibanisa amandla kumsebenzi wengqondo. Ingqondo yoMhlaza inobuntununtunu ngokwaneleyo ukuba inike ingqalelo kwiinkcukacha kunye nobudlelwane phakathi kwabantu xa u-Aquarius esilela ukwenza njalo. Banokwenza iimbono ezintle zibe yinyani, ngakumbi ezo zifuna abantu abaninzi ababandakanyekayo kwindlela yabo yokuba yinyani.
Noko ke, basenokuba nengxaki yokuthetha omnye nomnye ngethoni enye okanye baqondane kwasekuqaleni. Umhlaza ulawulwa yiNyanga, owona mzimba ukhawulezayo wezulu esibhakabhakeni, kodwa abakhawulezi ukuqaphela oko kuzifihla emva kwamazwi ka-Aquarius. Kukho ubunzima ku-Aquarius ukuba baveze imeko yabo yangaphakathi kwaye le nto i-Cancer inengxaki yokuqonda.
Esona siqalo silungileyo sobudlelwane babo siqinisekisiwe ukuba u-Aquarius ubona iqabane labo loMhlaza njengomntu ongaqhelekanga ofuna ukuvavanywa. Oku kuya kubavumela bobabini indawo eyaneleyo yokwazana kakuhle, kwaye oku kunokuba nefuthe kuzo zonke ezinye iinkalo zobudlelwane babo. Ukuba oku kuyenzeka, uAquarius uya kusondela kwezo zinto zingaqhelekanga zifunwa nguMhlaza ngokungathi aziqhelekanga kwaphela. Emva kwayo yonke loo nto, ayinguye wonke umntu onokusela ikofu yasekuseni ngokuthula ngokupheleleyo kunye neqabane lakhe kwaye ukonwabele oku kuthula njengoko aba maqabane banakho.
Umhlaza kunye ne-AquariusIimvakalelo
Ubume obungavumelekanga be-Aquarius buphazamisa isidingo seCancer sokuhlala kwindawo enokuthula, kwaye le nto baya kufumana kunzima ukudibanisa. Loo mvakalelo yasekhaya, epholileyo Iimfuno zoMhlaza zinokuphazanyiswa kakhulu luphawu lomoya oluvukelayo lwe-Aquarius. Baya kuzisa uxinzelelo kunye nolwazi oluninzi ebomini babo, kunye nesantya esingenakulawulwa yimeko efihlakeleyo yovelwano olunzulu Umhlaza kufuneka uphile ngayo yonke imihla.
Indlela abalubonisa ngayo uthando yahluke kakhulu, kodwa inokujoliswa ngokumangalisayo kubantwana babo nakwintsapho abayakhayo ukuba bafikelela kweli nqanaba. Akukho mqondiso wezodiac omiselwe kwangaphambili kubomi bentsapho obufana noMhlaza. Kubudlelwane kunye no-Aquarius, babeza kuthatha uninzi lwemisebenzi yemihla ngemihla kunye noxanduva. Ngembuyekezo, abantwana babo babeza kufumana ubuntwana obungenamida kunye nobomi bokhetho olukhululekileyo ekungekho esinye isibini esinokusinika sona. Esi sisiphumo somahluko phakathi kwabo kunye nokunyamezelana ekufuneka bekwenzile ukuze bahlale kunye.
Xa bethandana, abayi kukhawuleza baluphelise ubuhlobo babo. U-Aquarius uya kusondela njengoluhlobo lomngeni kwaye aqonde ukuzinza kunye nothando abalufumanayo kulo mlingani. Umhlaza uya kuqonda ukuba abazange bakhululeke ukuba babe ngokwabo endaweni yokuhlala kubudlelwane be-symbiotic abafunxwa ngokulula. Nje ukuba benze iqhina elomeleleyo, kuya kuba nzima kakhulu kubo bobabini ukuyiyeka.
Umhlaza kunye ne-AquariusImilinganiselo
Umhlaza uluxabisile ulwazi phantse kangangoko uAquarius eluxabisile ulwazi. Olu lunxibelelwano oluhle phakathi kwehlabathi labo kwaye ukuba luyakhuliswa lunokwanela nje ukuba bangabekwa bucala ngamanye amaxabiso ababambelele kuwo. Umhlaza uxabisa uzinzo, ukusondelelana kunye nosapho, ngelixa u-Aquarius exabisa inkululeko yabo, ingqondo kunye netekhnoloji entsha. Kukho umahluko phakathi kwehlabathi labo elisenokubonakala lingenakoyiswa, kodwa ukuba babambelele kuthando lwabo lwemigama nokuhamba okanye ukuba bafunda kunye, banokuwuqonda ngokulula isibakala sokuba ukuxabiseka kwabo kwezinye izinto kwahluka kakhulu.
Umhlaza kunye ne-AquariusImisebenzi ekwabelwana ngayo
Ngoxa iCancer iya kufuna ukuhlala ekhaya, yiya kwipikiniki epakini okanye kwivenkile yefenitshala, i-Aquarius iya kukhangela i-skyscraper ephezulu, inqwenela i-laptop entsha kwaye ifunde nantoni na ewela ezandleni zabo. Umsebenzi ophambili onokubadibanisa ngokwenene kuhambo. Nangona uMhlaza ubonakala usekhaya kwaye ungashukumi, oku akuyonyani ncam. Ngenxa yokuba luphawu lokuphakanyiswa kukaJupiter, baya kufuna ukuhamba kude. U-Aquarius uya kuhlala efuna ukukhwela inqwelomoya kwaye kuya kuba kuhle ukuba banokuhamba ngeparashuti ukuya kwindawo apho uMhlaza unokufika ngokukhuselekileyo kwiBoeing 747.
Sinokuthi uMhlaza kunye ne-Aquarius ayisosibini sakho esiqhelekileyo esonwabileyo kwiimeko ezininzi. Ubudlelwane babo bunokuba luxinzelelo kakhulu kwiqabane loMhlaza kwaye ukungabikho kobudlelwane kuya kubaqwenga. Nangona kunjalo, unxibelelwano phakathi kwabo lunokuba mnandi xa lufunyenwe, kwaye banokuvula iimbono ezintsha ezinomdla omnye komnye ukuba oku kuyenzeka. Bobabini bafuna ukufunda izinto ezintsha kwaye banokuhamba kude ukuba isiseko esomeleleyo senziwe ekhaya, ngoko uMhlaza unokuhlala unoxolo.
Ukuze esi sibini sihambe siye kwicala elakhayo, u-Aquarius kufuneka aqonde indlela elingaqhelekanga ngayo iqabane lakhe, kwaye azame ukuzama ukuba sekhaya ngelixa esonwabile. Umhlaza kuya kufuneka ukuba athathe iiseti eziphambili zoxanduva lokubambelela kwimbono yekhaya labo njengesiseko abanokuthi basuke naphi na apho bafuna khona. Ekugqibeleni, uMhlaza unokufumana ulonwabo olungakholelekiyo lwenkululeko kwaye u-Aquarius unokukhula ubuhlobo. Ukuba aba maqabane banokuthula kunye, bephuza ikofu yabo yasekuseni, oku kwiimeko ezininzi linyathelo lokuqala kwimpumelelo.
Gemini Sagittarius Khetha Uphawu Leo Isagittarius